Wiil uu dhalay ganacsade caan ah Oo askari si bareer ugu dilay Muqdisho. - iftineducation.com
iftineducation.com – Akhbaar ka imaanaaya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayaan in galabta lagu dilay wiil arday ahaa, xilli uu ka yimid Jaamacadda Muqdisho oo Kulliyadda Engineering, uu ka baranaayay. Waxaana dilay askari ka tirsan Ciidamada Dowladda.
Wiilka la dilay oo la oran jiray Cumar Xasan Warsheekh, ayaa waxay askariga ku wada murmayn Isgoyska Afarta Jardiino, taana ay soo dedejisay in rasaas uu madaxa kaga dhufto.
Arday kale oo la socday marxuumka la dilay, ayaa wuxuu sheegay in waxaan waxba ahayn uu askarigu kula murmay marxuumka, xilli uu tilmaamay in wadada dhinaceeda ay ku socdaalayeen.
Askari Booliska ee Isgoyska Afarta Jardiino, ayaa waxay gacanta ku dhigeen askariga dilka geystay, iyadoo ay ku wareejiyeen Taliska Saldhiga Booliska ee Degmada Yaaqshiid, oo kolkii dambe ku xiray Saldhiga.
Dhawaan ayay ahayd markii xaafada Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid lagu dilay Allaha u naxariistee Aweys Axmed Jiisoow, oo billo ka hor ka qalin jebiyay Jaamacadda Muqdisho.
Ragii riday Xiirane Oo wasiiro wada noqday !